Xasan Dahir "Farmaajo dhagaha fur sharciyad waa ka dhamaatay, hadaad damacdo inaad xoogtid, dadkaan waa dadkii... - Jowhar somali news leader
Home NEWS Xasan Dahir “Farmaajo dhagaha fur sharciyad waa ka dhamaatay, hadaad damacdo inaad...
Xasan Dahir “Farmaajo dhagaha fur sharciyad waa ka dhamaatay, hadaad damacdo inaad xoogtid, dadkaan waa dadkii…
Sheekh Xasan Dahir Aweys xabsi guri ugu jira dowladda federaalka ayaa muuqaal uu soo duubay kaga hadlay xaalada is mariga waaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada, isagoo tallo ku siiyay Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo inuu ku ceeboobin xaalada taagan.
Xasan Dahir ayaa labo meel ka tusay Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, isagoo xusay in dadka ka soo horjeeda ay yihiin kuwii dalka ka saaray Maxamed Siyaad Barre.
“War ninyahow waxaa kula talinayaa kiiskan haku ceeboobin, labo meel ayaa ka tusayaa, mid waxa weeye dadka hadda kaa soo horjeeda waa dadkii Maxamed Siyaad Barre, markii awoodda heystay oo xukun adag heystay waa nimankii meesha ka saaray, waa kuwee, Hawiye, Daarood oo aad ka dhalatay oo kala ahaa majeerteen iyo Ogaadeen, waxa weeyaan C/llaahi Yuusuf oo SSDF ahaa, USC iyo Caydiid, SPM iyo Ina Cumar Jees”ayuu yiri Sheekh Xasan Dahir Aweys.
Waxaa uu sheegay in saddexdaas qolo oo wada socda ay shalay rideen dowlad labaatan jirsatay, ayna hilfaha u qaadeen, isagoo is weydiiyaan in aanu isku dhejin dowlad afar jir ah, waxaana uu ku tilmaamay dhinacyada ka soo horjeeda aanay aheyn dad sahlan.
Xasan Dahir oo sii hadlayay ayaa yiri “”Mid kale waa ku sheegi lahaa, wiilkaan ha iga loogin (Fahad) waxbuu igu fadhiyaa waxa sheegayaa Fahad. axmed salebaan dafle kamana ciidan badna, kama tol badna”
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay Farmaajo inuu ku caqli qaato wixii horay u dhacay, isla markaana oo uu baraarugo, ciidan kasta oo uu keensadana aanay wax u tareyn.
Previous articleFaahfaahin ka soo baxaysa shil ka dhacay caawa Muqdisho
Next articleMadasha Badbaado Qaran oo warqad furan ka dhan ah Farmaajo u qoray Beesha Caalamka